Koofi “Baasaboorka Soomaaliga wuxuu gaaray in dunida laga aqoonsado” | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Koofi “Baasaboorka Soomaaliga wuxuu gaaray in dunida laga aqoonsado”
Koofi “Baasaboorka Soomaaliga wuxuu gaaray in dunida laga aqoonsado”
Agaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliyeed G/sare Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) ayaa faah faahin ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii uu xilka la wareegay sanad ka hor.
Agaasime Koofi ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku guuleystay horumarinta adeegyada dhinaca socdaalka iyo jinsiyadda, iyo sidii dalalka caalamka u aqoonsan lahaayeen Baasaboorka Soomaaliya.
“Mudadii aan xafiiska joogay waxyaabo badan ayaa inoo qabsoomay, waxaa bixinay tababaro la siiyay in ka badan 100 shaqaale, in markii u horeysay imtixaan loo galo shaqooyinka ka banaan hey’adda socdaalka iyo Jinsiyadda, taasna waxay fursad siisay in ardaydii dalka wax ku baratay inay Imtixaan u galaan”ayuu yiri Agaasimaha Hey’adda Socdaalka oo la hadlayay telefishinka Qaranka ee SNTV.
Waxaa uu sheegay in baasaboorka Soomaaliga uu haatan gaaray in Dunida oo dhan laga aqoonsado, waxaa uu tilmaamay in shanta qaaradood ee caalamka lagu tagi karo.
“Baasaboorka Soomaaliga waxaa haatan laga aqoonsan yahay Aasiya, Africa, Yurub iyo Ameeria, wixii intaas ka harsan waxaa rajeynayaa sanadaha soo socda inaan ku guuleysano”ayuu yiri Agaasime Koofi.
Waxaa uu sheegay in waxyaabaha suura geliyay in Baasaboorka Soomaaliga aqoonsadaan dowladaha Caalamka inay tahay tayadiisa oo aad u wanaagsan laguna qancay, amni ahaan, isagoo tilmaamay in hada ay dadaal ugu jiraan sidii qaar ka mid ah dalalka waqooyiga Ameerika looga aqoonsan lahaa.
Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliyeed ayaa sanadihii u dambeeyay sameysay horumaro badan, waxaana hey’addu ay haatan bilowday inay la jaan-qaado nidaamyada casriga ah ee ay ku shaqeeyaan Hey’addaha Socdaalka Adduunka, kaddib markii shaqaale badan lagu soo tababaray dalka dibaddiisa,